Ndị na-emepụta akpa Duffle & Sling & Suppliers - China Duffle & Sling Bag Factory
Ngwunye akpa Duffle Tactical Waterproof nke dị n'èzí 55L
Ọrụ dị arọ 600D denier nylon anaghị egbochi mmiri, eriri ubu, enweghị mmiri, inogide na ọrụ mgbochi ịkpụ.Ihe gburugburu ebe obibi, dị mma iji, ịdị elu dị elu, nkọwa ya ọ bụla ga-eju gị anya, ka ọ bụrụ onye na-enyere gị aka na onye mmekọ gị mgbe ị na-apụ, 2KGS arọ.
Ihe Nkeji:LSD 4001
Nha:22.5L * 11.5W * 12.5H inch
Ngwungwu akpa Gear Tactical Tactical Waterproof
600D oxford waterproof fabric Gear Bag, 2 eriri ubu siri ike, na-adịgide adịgide iji, ọrụ mgbochi ịkpụ.Ihe gburugburu ebe obibi, dị mma iburu, 2KGS arọ.
Ihe Nkeji:LSD 4002
Akpa Tactical Military Oxford Waterproof Range Akpa Duffle Pistol Case
Akpa kenkwucha dị iche iche, nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị arọ 600D oxford shei kpara, nwere mkpuchi PVC ugboro abụọ, enweghị mmiri, na-adịgide adịgide na mgbochi esemokwu.W. aka na-ebu eriri na eriri ubu ogologo kpọgidere site na nko, ihe gburugburu ebe obibi, akpa zipa 5 n'èzí.
Ihe Nkeji:LSD 4003
Nha:18L * 10W * 10H inch
Ihe:600D oxford w.PVC mkpuchi
Nkwakọ ngwaahịa:1pc n'ime a polybag na 20 PC n'ime katọn ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Azụ azụ n'èzí Oxford mmiri oyi na-ekpo ọkụ Duffle akpa
Waterproo fishing cooler duffle Bag, 600D oxford shei akwa, na aka na-ebu eriri na ogologo ubu eriri, ihe gburugburu ebe obibi, mfe iburu, 1.1KGS kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 4004
Ihe:600D oxford nwere ọgwụgwọ mgbochi mmiri
Agba:Olive Green, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ịchụ nta n'èzí Oxford mmiri anaghị egbochi mmiri Duffle Range akpa
Waterproof ịchụ nta oxford nso akpa, 600D oxford shei akwa, na aka na-ebu eriri na ogologo ubu eriri, n'ihu akụkụ na buckles imeghe na imechi, mfe iburu, 1.0KGS kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 4005
Nha:13L * 7.5W * 7.5H inch
Agba: Camouflage osisi, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ọrụ dị arọ n'èzí 900D Denier nylon Trolley Duffle akpa
Ọrụ dị arọ 900D denier naịlọn ákwà nwere 2 * PVC mkpuchi, eriri ubu nylon, imewe ihu igwe na-eguzogide, na-adịgide adịgide, ihe gburugburu ebe obibi, dị mma iburu, ịdị arọ 2KGS.
Ihe Nkeji:LSD 4006
Ihe:900D Oxford mkpuchi mkpuchi
Agba:Agba camouflage, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
N'èzí Green Heavy Duty 900D Waterproof Oxford Duffle Bag
Ọrụ dị arọ 900D oxford akwa nwere mkpuchi PVC 2 *, eriri ubu, imewe ihu igwe na-eguzogide, mgbochi ịkpụ, ihe enyi na enyi, 1.8KGS ibu.
Ihe Nkeji:LSD 4007
Njem mma Duffel akpa
Akpa duffel mgbatị ahụ nke ọma, nke akwa 600D oxford na-ekpuchi mmiri rụrụ, nke ejiri aka na-ebu eriri na eriri ubu enwere ike iji otu ubu were.Site na oghere akpụkpọ ụkwụ dabara adaba na-akpakọ akpụkpọ ụkwụ na njem ahụ, n'ime nnukwu akpa nchekwa zipa nke nwere ọtụtụ uwe na ntinye kwa ụbọchị, 0.68KG kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 4008
Nha:24L * 10W * 13H inch
Njem Fitness Duffle Bag OEM & ODM
Njem mma duffle akpa, akwa oxford 600D, na-eguzogide ma na-adịgide adịgide, n'ime ya nwere nnukwu akpa nchekwa yana obere akpa mkpuchi maka mkpanaka ma ọ bụ obere akpa.Ngwa eji eme ihe na gburugburu ebe obibi na enweghị mmerụ ahụ, dị mfe iburu n'ihe dị arọ, 0.41KG kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 4009
Nha:16L * 7.5W * 12.5H inch (elu agbatịgoro bụ 17.5 '')
Ihe:Ihe 100% polyester nwere mkpuchi PU
Egwuregwu Tote Fitness Akpa OEM & ODM Unisex style
Njem mgbatị ahụ duffel akpa, ụdị unisex, nwere ebe akpụkpọ ụkwụ, akwa 600D oxford, mgbochi esemokwu, mmiri na-eguzogide mmiri, n'ime ya na nnukwu akpa nchekwa na obere akpa mkpuchi maka mkpanaka ma ọ bụ obere akpa.Ọ dị mfe iburu ihe dị arọ yana nnukwu ikike ịkwakọ ngwaahịa, 0.4KG kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 4010
Nha:19.5L * 8.5W * 12.5H inch
Agba:Black + Beige, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Akpa mgbatị ahụ Duffle na akpa ime ime
Egwuregwu mgbatị ahụ.akpa duffle, ihe pụrụ iche nwere eriri otu ubu, N'ime nnukwu ikike yana akpa ime ime, akụkụ ront na obere akpa ntupu nwere ike ibu chaja mkpanaka ma ọ bụ USD nke ọma, ihe gburugburu ebe obibi na enweghị mmerụ ahụ, dị mfe iburu na ihe dị arọ & ihe dị nro, 0.51KG kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 4011
Nha:17.5L * 7.5W * 12H inch
Ihe:Ihe 100% polyester nwere ọgwụgwọ mmiri
Agba:Blue, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Akpa ibu njem buru ibu nnukwu akpa nku oyibo
Akpa duffle akpa njem, n'ime nwere nnukwu nchekwa ikike ịkwakọ na ime akpa atọ, ihe eji achọ mma pụrụ iche, ngwa mma dị mma, dị mfe iburu na ihe mmetụ dị nro na nke dị nro, 0.9KGS kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 4012